काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ महिनादेखि लागू हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था शनिबार
मत्स्य बचत तथा ऋण सहकारीमा रोजगारीको अवसर, कति चाहिन्छ शैक्षिक योग्यता ?
काठमाडौं । मत्स्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । सहकारीले
नेपाल फाईनान्सको अध्यक्षमा प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधान नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल फाईनान्स लिमिटेडले अध्यक्षमा प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधानलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको २९औं
राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुन खातामा कति ब्याज दिन्छ ?
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले ब्याजदर परिवर्तन गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सहकारी बैंकले बैशाख